ပြောင်းလဲသင့်ပြီ ဖြစ်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ပြောင်းလဲသင့်ပြီ ဖြစ်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခု
Posted by ဦး ဗိုလ်သိန်း on Aug 24, 2012 in Copy/Paste | 8 comments
မြန်မာနိုင်ငံသည် အခြားကမ္ဘာ့နိုင်ငံများနည်းတူ နည်းပညာခေတ်ကို ရေစီးကြောင်းအတွင်း စီးဝင်လာသည်နှင့်အမျှ နည်းပညာများတိုးတက်ခေတ်မီလာပြီး အများပြည်သူဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများစွာတို့တွင် ကွန်ပျူတာအခြေခံသော နည်းစနစ်များဖြင့် အစားထိုးကာ လျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ယင်းသို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာတွင် မော်တော်ယာဉ်များ ဓာတ်ဆီဝယ်ယူခြင်း၊ ဘဏ်များတွင် ငွေထုတ်ယူခြင်း၊ မော်တော်ယာဉ်ရပ်နားခွင့်ကတ်များသာမက ပင်စင်စားများအတွက်ပင် အီးပင်စင် ထုတ်ယူနိုင်သော Smart Card များကို အသုံးပြုကာ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဆောင်ရွက်နိုင်သဖြင့် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနိုင်ကြပြီဖြစ်သည်။
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုထုတ်ပေးရာတွင်လည်း ယခင်ကလို လက်ရေးစနစ်ဖြင့် မဟုတ်တော့ ဘဲ ကွန်ပျူတာမှ တိုက်ရိုက်ဖတ်ရှုနိုင်သော E-Passpoart စနစ်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားရာတွင်လည်း သာမန်အားဖြင့် စတင်ဆောင်ရွက်သည်မှ (21) ရက်ပြည့်လျှင် ထုတ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
ထို့အတူ Passpoart အသစ်ဆောင်ရွက်သည့်သူနှင့် သက်တမ်းတိုးကြသူအားလုံးအတွက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကြာမြင့်ချိန်မှာလည်း(၂၁)ရက်ပင် ကြာမြင့်ပါ သည်။ ယခုကဲ့သို့ အသစ်ဆောင် ရွက်သူအတွက် စာရင်းဇယားအချက်အလက်များစိစစ်ရန် အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုပေးရသည်မှာ သဘာဝကျပါသည်။ သို့သော် Passpoartကို သက်တမ်းတိုးသူတစ်ယောက်အတွက်ကိုမူ အချက် အလက်များကရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သည့်အတွက် အချိန်ကိုလျော့နည်းပေးသင့်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆို သော် ပညာရေးကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံစာကဲ့သို့အချက်အလက်မျိုးကို သက်တမ်းတိုးသည့်အခါ တိုင်း ထပ်ကာထပ်ကာ ခဏခဏပေးနေရခြင်းမျိုးသည် မလို အပ်ဘဲ အချိန်ကြာမြင့်ခြင်းကြောင့် မဖြစ် သင့်ပါ။ ယခင်သက်တမ်းတိုးစဉ်ကတည်းကပင် ကင်းရှင်းသောကြောင့်သာ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို ထုတ်ယူခွင့်ရခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ ပြည်ပနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံးများတွင်ပင် သက်တမ်းတိုးပါက တစ်ရက်သာ အချိန်ပေးရပါသည်။ ပြည်တွင်းတွင်လည်း နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းတိုးခြင်းမှာ ယခုထက် မြန်ဆန် သွက်လက်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါက ပြည်သူလူထုအတွက်များစွာအကျိုးရှိလာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း
(19-8-2012 ရက်နေ့ ကြေးမုံသတင်းစာထဲတွင် ပါသွားသည့် ကျွန်တော့် လက်ရာလေးပါ)
မြန်ကောင်းသက်သာ ကိုပေ ပြောသလို ဗဲရီးဂွဒ် ပါ ဆြာသိန်းရေ !
လူတွေအကျိုးများစေတဲ့အတွက်.. ကုသိုလ်ရတဲ့.. ထောက်ပြချက်လို့ယူဆပါတယ်..
ပညာရေးကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံစာကဲ့သို့အချက်အလက်မျိုးကို သက်တမ်းတိုးသည့်အခါ တိုင်း ထပ်ကာထပ်ကာ ခဏခဏပေးနေရခြင်းမျိုးသည်
ဦးလေးသိန်း သတင်းစာထဲရော ဒီအတိုင်းဘဲလား ….
ကျနော်က အခု ကျောင်းသွားတတ်မလို့ ……………. အဲဒါလေး
သဂေါင်းစာရင်း ရှိလည်း အဲ့စာရင်းတိုင်ရမှာပဲ…..။ လာထား………..
အဲ ပတ်စပို့ပရိုစီဂျာတော့ ပြောင်းလဲသင့်ပီလို့ ကျနော်လဲထောက်ခံတယ်